On avr 25, 2018 2 191
Mafana ny toe-draharaha politika eto Madagasikara, raha atao indray mitopy maso.
Mifamahofaho be ihany raha hidirana lalina. Andaniny mihamaro, mahazo vahana rahateo ny hetsi-bahoaka tarihin’ireo solombavam-bahoakan’ny fanovana. Mihavelom-bolo ny mpitolona marobe, manohina ny antso ny fihazahazaky ny toe-draharaha.
Etsy ankilan’izay toa tsy taitra, mainka aza maneho fahavononana hanohy ny asany ny filoham-pirenena. Ireo mpikambana amin’ny governemanta tsy mbola nisy nametra-pialana hatramin’izao.
Ny mahavariana anefa, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ity no milomay. Azo lazaina ho mikoropaka mihitsy satria tapaka fa halefa aty Madagasikara indray, andriamatoa Chissano. Nanapaka izany ny filoham-pirenena afrikanina fito, ao anatin’ny SADC, androany. Tsy niandry ela, fa vao hariva teo, indro koa fa niditra an-tsehatra ny Vondrona Afrikanina. Efa nisy sahady ny fampihaonana ny ankolafy mpifanandrina. Tazana teny Ankorondrano, ireo lehibe mpandrindra ny hetsika eny amin’ny kianjan’ny 13 mai, nahitana ny depiote Razanamahasoa Christine sy ry Tinoka Roberto ary ny maro hafa. Nisolo tena ny antoko HVM, ny filohan’ny Antenimieran-doholona Rakotovao Rivo. Tsy nisy nipika ny dinika fa ilay finiavana hiady hevitra dia efa vaovao lehibe.
Izany rehetra izany, miteraka baraingo lehibe ho an’ny mpanara-baovao, mahasarotra ny famakafakana politika. Mahalasa saina ity vahiny sarotiny alohany tompony ity. Very hasina ny mahamalagasy antsika, tsy afaka miresaka raha tsy vahiny. Nankaiza ny FFKM? Nankaiza ny KFM? Samy tsy nisy mandray ny andraikiny hatreto. Na misy aza ireny diniky ny K3F, ivondronan’ny ankolafin-kery samihafa ireny, tsy hita taratra ny vahaolana avy amin’ny malagasy ho an’ny malagasy.
Soa fa voafehy anefa ny zava-drehetra ankehitriny. Samy nahafehy tena ny andaniny sy ny ankilany ka tsy nisy ny namoy ny ainy ankoatran’ny tamin’ny sabotsy .
Na izany aza vao manomboka io ny krizy politika, hinoana fa tsy haharitra ela izany .
Ny hisavorovoroan-kilantoana, hoy ny razantsika hendry. Hantenaina fa tsy hisy fiantraikany amin’ny sosialim-bahoaka izany. Enga anie ny mpanao politika miantsehatra amin’io disadisa io tsy hijabaka amin’ny kajikajin’ireo vahiny satria tena aoka izay ity botom-bazaha ity.
Nizotra tamim-pilaminana ny dian’ny Depiote sy ny vahoaka teny amin’ny HCC